दशैंको महिमा र गरिमा ⋆ ए टु जेड समाचार डट कम - ए टु जेड समाचार डट कम
दशैंको महिमा र गरिमा
३१ आश्विन २०७५, बुधबार २०:०६
असोज ३०, चितवन,दशै वा वडादशमी नेपालीहरु घरघरमा भित्रिएको छ। नेपालीहरु दशै मनाउन विदेशबाट र बिशेषगरी काठमाडौंबाट आ आफ्नो गृहजिल्ला फर्कनेक्रम जारी छ । नेपाल बाहिरका नेपालीहरुले दशैं र तिहारलाई गोर्खालीहरुको पहिचानको रुपमा लिन्छन् । दार्जि्लिङ्ग, सिक्किम, डुअर्स, आसाम,देहरादूनमा त दशैं र तिहारलाई गोर्खाहरुको एकताको बिंडो ठान्छन् । भारत, बर्मा, श्रीलंका, इण्डोनेशिया,लगायत विश्वका अनेकौं देशहरुका हिन्दुहरुले आआफ्नै प्रकारले दशैं मनाउँछन् । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलीया, कोरिया, फान्स, जर्मन आदि राष्ट्रहरुमा दशैंलाई नेपालीहरुले राष्ट्रय पहिचानकै रुपमा बडोहर्षोल्लासका साथ मनाउने गर्छन् । जुनसुकै जाति थरको नेपाली होस दशै, धनी र गरीब सबैको साझा चाडको रुपमा लिइन्छ । लिम्बु,र्राई,मगर,गुरुङ,तामाङ, थारु जातिले वारपार निधारभरी दहीसँग मुछेर सेतोअक्षताको टिका लाएर विजयदशमीदेखि पूणिर्माको दिनसम्म बडो हर्षल्लासपूर्वक आमा, बाबु, ससुरा, सासु, गुरु र अन्य मान्यजनबाट टिका थापेर आसिरवाद ग्रहणगर्ने गर्छन् । निधारभरी दहीसँग मुछेर सेतो अक्षताको टिका लगाउने चलन जनजातिहरुबाटै प्रारम्भ भएको हो । निधारभरी टिका लाउने चलन दक्षिणबाट यहाँ आएको होइन । काठमाण्डौं उपत्यकामा अबिर मिसाएर राता टीका लाउने चलन छ । त्यही चलन आजभोलि नेपालभित्र र बाहिर बढ्दो छ । भारतीय हिन्दुहरु टीका नलगाएर पनि दशैको उत्सव मनाउँछन् ।
घटस्थापनादेखि नवरात्रसम्म गरिने नवदुर्गा भवानीको पूजा अति प्राचीन परम्परा हो । देवीपुराणमा(’रामले आश्विन(शुक्लको नवरात्रमा भगवतीको उपासना गरेर विजयदशमीको साइतमा लंकामा रामणको बिरुद्ध युद्ध गर्न प्रस्तान गरेको’ कुरा उल्लेखछ । पद्मपुराणमा उल्लेखछ( ’चैत्रशुक्ल चतुर्दशीका दिन रामले रामणको वध गरेका थिए ।’ अनादिकालदेखिनैं शक्तिको प्रतीकको रुपमा ’दशैं’लाई साझा चाडकोरुपमा मानीआएको देखिन्छ । अनादिकालमा महिषासुर नामको राक्षसले गरेको अत्याचार र पीडाबाट मुक्तहुन आराधना गर्दा दुर्गा भवानीले महिषासुर राक्षस मारेर खुसीयाली मनाएको विजयदशमीको दिनदेखि शुभदिनकोरुपमा मानिँदै आएको हो । असत्य माथि सत्यको विजयको प्रतिकको चाड हो दशैं । पृथ्वीनारायण शाहबाट विशाल नेपालको एकीकरणको अभियानमा काठमाण्डौं उपत्यका विजयपछि दशैमा फूलपाती र जमरा गोर्खाकी गोरखकाली मन्दिरबाट मगर जातिको पूजारीबाट काठमाण्डौं ल्याइन्छ । त्यसैलाई बर्ढाईंको रुपमा लिइन्छ । दशैं परम्परागत नेपालीको सांस्कृतिक पर्व हो ।
तर कतिपय क्रिस्चियन प्रभावमा परेका र यसक्षेत्रको सांस्कृतिक अध्ययन नगरेकाहरुले पृथ्वीनारायण शाहले जवरजस्ती लाधेको हो भनेर पाल्छी कुरा गरेर दशैं बारेमा भ्रम खडागर्न खोज्दैछन् । पार्टिरंगले पनि दशैंलाई दुषित पार्न खोज्दैछ । दशैं तिहार जनजातिको चाड होइन भन्दै आफूहरुलाई पृथक जाति देखाउने केही जनजातिहरुमा होड शुरुभएको छ । यस बिषयमा ’बृहत्तर नेपाली पहिचानलाई जातीय पहिचानतिर खुम्च्याउने प्रयास हुनथालेको छ’ भन्दै दाजिलिङ्गका प्रा.गोपीनारायण प्रधानले दुःख प्रकट गरेका छन् । दशैंको बहिस्कार विषयमा स्वामी प्रपन्नाचार्य भन्नुहुन्छ (’दुर्गा, चण्डी र सुम्निमा तथा युसाहाम एउटै देवीको नाम हो । इष्टदेव महादेव, पार्बतीलाई पारुहाङ तथा सम्निमाको रुपमा मान्ने गरिएकोछ । लिम्बुहरु धाृवासाम, युमासाम भनेर महादेव र पार्बतीलाई इष्ट देवदेवीको रुपमा मान्दछन् ।
वास्तवमा दशैं धर्म होइन, यो एउटा परम्परागत सांस्कृतिक मान्यता हो । विश्वभरमा बौद्ध र हिन्दुहरु यसलाई आफ्नो मौलिक चाडको रुपमा ठान्दछन् । दशै, तिहार, तीज, बुद्धजयन्ती, शिवरात्री, इन्द्रजात्रा आदिजस्ता चार्डपर्वहरु हिन्दु र बौद्धका जीवनपद्धति बनेका छन् ।
दशैंको महत्वबारे चर्चा गर्नु पूर्व आजका बालबालिका र किशोर किशोरीहरूको मनोविज्ञानको बारेमा थोरै चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा भएका चाडपर्व रीतिरिवाज आदिमा सुन्दै हाँसो लाग्ने अलौकिक वा जादुगरी कथा किम्वदन्ती जोडिएर आएका छन् । वेद पूराण र किम्वदन्ती कथाहरू लोक साहित्य हुन् । साहित्यका विम्ब र प्रतीकले व्यक्त गर्न खोजेको कुरा नबुझेर पुर्खाले मान्दै आएको परम्परा भन्दै हामीले मान्दै आयौं तर आजका बालबालिका र किशोर किशोरीहरू त्यो मान्ने वाला छैनन् । किनभने यो साइबर युग हो कुनै कर्मकाण्ड गर्नुको पछाडि त्यसको बैज्ञानिक सत्यतथ्य बुझ्न चाहने जिज्ञाशू रहेको हामीले पाउन थालेका छौं । अतस् हाम्रो संस्कृति र रीतिरिवाजको बैज्ञानिक पक्ष उनीहरूलाई बुझाउन सकेनौ भने उनीहरूले त्यो मान्नेवाला छैनन् फलस्वरूप हाम्रो धर्म संस्कृति र रीतिरिवाजको बारे बैज्ञानिक सत्य तथ्य खोज्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । प्रस्तुत लेख त्यसैको एउटा झिनो प्रयास हो ।
संस्कृत शब्द दशमीबाट प्राकृत हुँदै नेपाली भाषामा आएको तद्भव शब्द हो “दशैँ“ । नेपाली हिन्दू सम्प्रदायमा दशैं सबैभन्दा ठुलो र महत्वपूर्ण चाडको रुपमा मनाउने परम्परा रही आएको छ । आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म १५ दिन धुमधामले मनाइने यो दशैं कहिलेदेखि शुरु भयो यसको कुनै ईतिहास भेटिएको छैन । यो एक्काइसौ शताब्दीमा पनि मान्छेहरू वन्य र अर्ध वन्य अवस्थामा रहेको हामीले भेट्टाउँछौं । हाम्रा पिता पुर्खाहरू अर्ध बन्य अवस्थाबाट बिकशित हुँदै कृषि युगमा प्रवेश गरेपछि दशैं मान्ने परम्परा शुरु भएको हुनु पर्दछ र पछि गएर धार्मिक आवरण ओढाइएको हुनसक्छ भन्ने विद्वानहरूको मत छ । प्राचिन कालदेखि हिन्दू समाजमा दशैं पर्व अत्यन्तै महत्वका साथ मनाइने गरिन्छ ।दशैंको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक महत्वको बारेमा पछि चर्चा गरौंला पहिला पौराणिक महत्वको बारेमा चर्चा गरौँ ।
अर्का थरि मत अनुसार मानव शरीर नौवटा ढोका भएको दूर्ग हो । नौवटा ढोका भएको दूर्ग अर्थात् नव द्वारको दूर्ग नवदुर्ग । यही नवदुर्ग शब्द कालान्तरमा नवदुर्गा भएको भन्ने कथन पनि भेटिन्छन् । ज्ञानरुपी दियो बालेर अन्धकाररुपी अज्ञानतालाई परास्त गरी आत्मा रुपी मन्दिर उज्यालो पार्ने र काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जन्य रावण र महिषासुरको जस्तो दुर्गुणहरूको बलि दिएर भगवतीलाई खुशी पार्ने दिवशको रुपमा दशैं पर्वलाई लिनु पर्दछ, ति आधुनिक विद्वानहरू भन्ने गर्दछन ।
ऋग्वेदमा उल्लेखित धेरै कुराहरू वर्तमान समयमा बैज्ञानिकहरूले विज्ञानसँग तुलना गरेर हेर्ने र सो को अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन् । जुन बेला पौराणिक साहित्य लेखन आरम्भ भयो त्यो समय आजको जस्तो बैज्ञानिक अनुसन्धानको सुबिधा नभएकोले र सनातन धर्मका ज्ञाताहरूले पुस्तामा आफ्नो ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने प्रवृति न्यून रहेकोले सनातन शाश्वत सत्यहरूको प्रचार प्रसार हुन नसकेको प्रतित हुन्छ । हाम्रा वेद पूराण उपनिषद् आदि धार्मिक ग्रन्थलेभन्दा बैज्ञानिक तथ्यमा आधारित हुँदा हुँदै पनि बैज्ञानिक तथ्यको आधारमा यसको ब्याख्या विश्लेषण र खोज अनुसन्धान गर्नुभन्दा पूजा उपासना आदिमा सीमित राखिएकोले यसको महत्व विश्व जनमानसमा न्यून भएको हुन सक्छ ।
जुनसुकै मतले जेसुकै भनेता पनि, दशैं मान्ने तरिकामा बिबिधता भए पनि आखिर दशैं त सबै हिन्दूहरूले मनाउँछन् । किनभने दशैंको सामाजिक र राजनीतिक महत्व पनिरहेकोछ । शरद ऋतु, वन उपवनमा ढकमक्क फूल फुलेको छ । खेतमा लहलह धानका बालाहरू झुलेका छन् । वारीमा तरकारीहरू, फलफूलहरू लटरम्म फलेका छन् । वर्षा थामिएको छ, न जाडो छ न गर्मी । कृषि प्रधान देशका नागरिकहरूलाई हलो, कुटो, कोदालो र हिलो माटोबाट फुर्सद मिलेको छ । घरपालुवा पशुपन्छीको बंश वृद्धि भएको छ । यही उमङ्गमय वातावरणमा जिजीविषाका लागि टाढा टाढा देश परदेशमा गएका आफन्तजनहरूसंगको मिलनले कसको मन उल्लासित हुदैन र ! मीठो खाने, राम्रो लगाउने र मनोरंजन गर्ने फुर्स्दिलो क्षण मात्र नभएर नाता सम्बन्धलाई गाढा बनाउने तथा चिसिएको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउने पारिवारिक तथा सांस्कृतिक राष्ट्रिय राजनीतिक अवशरको रुपमा पनि दशैंको महत्व रहेको छ ।सरकारले पनि यस पर्वमा लामो छुट्टी दिएर र एक महिनाको तलब दशैं खर्च दिएर दशैंको महत्वलाई अँझै उजागर गरेको छ ।
दशैंको वली दिनु उचित कि अनुचित ?
बलि प्रथा विवादमा छ अहिले । कसैको रमाइलोका लागि कसैको जीवन समाप्त पार्ने कुरा चित्त नबुझ्दो छ । वली प्रथाको पछाडी पनि अहिंसा मिसिएको छ । जथाभावी मानिसले पशु हिंसा नगरुन भनेर प्राचिन ऋषिहरुले एउटा व्यवस्था गरे । जथाभावी पशु हिंसा नगर्नका लागि विधि तय गरिएको छ । तर हतियार उठाई हत्या गरिहाल्न पाइन्न । पशुको वली दिँदा विधि बनाइएको छ । शास्त्र अनुसारको बलि भएको छैन । बलि दिनका लागि युवा पशु हुनु पर्ने भनिएको छ । स्त्री पशुलाई बलि दिन्न पाइन्न, निरोगि हुनुपर्छ । नियम पुरयाएर बलि नदिइकाले वलि दिनेहरुले पनि पुण्य पाएका छैनन ।
वलि दिने कुरा शास्त्रमा नभएको होइन । विधि पुरयाएर वलि दिँदा पुण्य हुन्छ भन्ने जमात एकातिर छ भने भने अर्कालाई मारेर कसरी पुण्य हुन्छ भन्ने जमात अर्कोतिर । किनकी सामान्य मान्छेले शास्त्रका सबै रहस्य बुझेका छन् भनेर अहंकार गर्न पनि हुन्न । विधि पुर्याउन नसके त्यो कर्म नगर भन्छ शास्त्रले । गढिमाईको बलि होस् वा दशैको बेलामा देवीपीठहरुमा दिइने बलि नै किन नहोस् त्यो दानविय नृसंस हत्या हुन्छ । त्यहाँ बलिको विधि नै पुगेको हुँदैन । पुजारी सबैलाई हतार हुन्छ । जसले गर्दा विधिलाई लत्याइएको छ ।
वरिष्ठ साहित्यकार एवं संस्कृतिवीद मुकुन्द शरण उपाध्यायसँगै कुराकानीमा आधारित
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्यो
रानीपोखरी निर्माणमा महानगरपालिकालाई दुई करोड घाटा